Cyproterone acetate အမှုန့် (427-51-0) hplc≥98% Buy | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / ဟော်မုန်းမြှင့်တင်ခြင်းလိင် / အထီးအသုံးပြုခြင်း / Cyproterone Acetate အမှုန့်
SKU: 427-51-0. Categories: အထီးအသုံးပြုခြင်း, ဟော်မုန်းမြှင့်တင်ခြင်းလိင်
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Cyproterone acetate အမှုန့် (427-51-0) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Cyproterone acetate အမှုန့် တစ်ဦးဟော်မုန်းကုထုံးသည်နှင့်လည်း၎င်း၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြင့် Cyprostat, Androcur, Andros-Diane, Cyprone, Dianette ကဆန့်ကျင်အန်ဒရိုဂျင်ကိုခေါ်မူးယစ်ဆေးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သဘောကိုသိရ၏။
Cyproterone acetate အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
Cyproterone acetate အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Cyproterone acetate အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 200-201 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ကာယဗလသံသရာအတွက် Cyproterone acetate အမှုန့်
ဓာတုအမည်များ: Cyprostat, Androcur, Andros-Diane, Cyprone, Dianette
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်များ: Cyproterone acetate အမှုန့်, Diane-35 အမှုန့်, 427-51-0
Cyproterone acetate အမှုန့်အသုံးပြုမှု
Cyproterone acetate အမှုန့်တစ်ဦးပါးစပ် (နှုတ်ဖြင့်) တက်ဘလက်အဖြစ်နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာသရုပ်ဆောင်ထိုးဆေးအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ Cyproterone acetate အမှုန့်တက်ဘလက်များအတွက်အကြံပြုထိုး 200 300 ဆေးများမှ4သို့ ခွဲ. အစာစားပြီးပြီးခေါ်ဆောင်သွားနေ့စဉ် (6 တက်ဘလက်2မှ) မီလီဂရမ်3မှ mg ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦး orchiectomy (ဝှေး၏ဖယ်ရှားရေး) ခဲ့ကြသူလူတို့သညျအဘို့, 100 တစ်အောက်ပိုင်းထိုး 200 မှ MG အကြံပြုသည်ကွဲပြားဆေးများအတွက်နေ့စဉ် MG ။ Cyproterone acetate ကုန်ကြမ်းအမှုန့် (Androcur® Depot) ၏ရှည်လျားသော-သရုပ်ဆောင်ပုံစံများအတွက်အကြံပြုထိုး 300 တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ကြွက်သားသို့ထိုးသွင်းခုနှစ် mg ဖြစ်ပါတယ်။
အရာများစွာကိုထိုကဲ့သို့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်, အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများ, နှင့်အခြားဆေးဝါးများအဖြစ်, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလိုဆေး၏ဆေးထိုးထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ကဒီမှာစာရင်းမြားထံမှကွဲပြားခြားနားနေတဲ့ထိုးအကြံပြုပြီဆိုရင်, သင်သည်သင်၏ဆရာဝန်တိုင်ပင်ခြင်းမရှိဘဲဆေးသုံးနေသည့်လမ်းမပြောင်းကြဘူး။
သင်ပထမဦးဆုံးယူရန်စတင်သောအခါအ Cyproterone acetate အမှုန့်အားနည်းခြင်းနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကိုတတိယလပြီးနောက်, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဆေးမှနေသားတကျဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်, ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုလျော့နည်းသွားရပါမည်။
ဒါဟာသင့်ဆရာဝန်များကသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းအတိအကျအတိုင်းဤဆေးကိုယူရန်အရေးကြီးပါသည်။ သင်တစ်ဦးထိုးလက်လွတ်လြှငျ, တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကယူပါ။ ဒါဟာနီးပါးသင်၏နောက်ထိုးဘို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်လျှင်, လွဲချော်ထိုး skip နှင့်သင့်ပုံမှန်အစည်းအဝေးထိုးအချိန်ဇယားနှင့်အတူဆက်လက်။ တစ်ဦးလွဲချော်တဦးတည်းတက်သည်ဖြစ်စေနှစ်ဆထိုးမယူပါနှင့်။ သင်တစ်ဦးထိုးပျောက်ဆုံးပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမှန်းသေချာမသိကြပါလျှင်, အကြံဉာဏ်သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးဆက်သွယ်ပါ။
Cyproterone acetate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုယူပြီးစဉ်ကဆေး၏ထိရောက်မှုကိုလျော့ကျစေနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရက်စားသုံးမှုကန့်သတ်ထားရပါမည်။
, အခန်းအပူချိန်မှာဆေးဝါးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းအလင်းနှင့်အစိုဓာတ်ကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း, သားသမီးများ၏လက်လှမ်းမမီထဲကစောင့်ရှောက်လော့။
(ဥပမာပုစုပ်ချသို့မဟုတ်အိမ်သာထဲမှာ) သို့မဟုတ်အိမ်ထောင်စုအမှိုက်သရိုက်များတွင်ရေဆိုးများတွင်ဆေးဝါးများဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးမထားပါနဲ့။ မရှိတော့လိုအပ်နေပါသည်သို့မဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီဆေးဝါးများများဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးဖို့ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ဆေးဝါးကိုမေးပါ။
Cyproterone acetate အမှုန့်သို့မဟုတ်ဤဆေးဝါးမဆိုပါဝင်ပစ္စည်းများမှမတည့်သို့မဟုတ်အထိခိုက်မခံပေးနကွေသ
တက်ကြွအသည်းရောဂါသို့မဟုတ်လျှော့ချအသည်း function ကို -have
လျှော့ချကျောက်ကပ် function ကို -have
Cyproterone acetate အမှုန့်အပေါ်သတိပေး
သငျသညျ Cyproterone acetate အမှုန့်ကိုသုံးပြီးစတင်ခင်မှာ, သငျသညျရှိစေခြင်းငှါမဆိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများသို့မဟုတ်ဓာတ်မတည်၏သင့်ဆရာဝန်အကြောင်းကြားရန်သေချာစေပါ, မည်သည့်ဆေးဝါးများသင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်သို့မဟုတ်နို့တိုက်ကျွေးကြသည်ဖြစ်စေ, တာနှင့်သင့်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးမဆိုအခြားသိသာထင်ရှားသောအချက်အလက်များနေကြသည်။ ဤရွေ့ကားအချက်များသင်ဤဆေးကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်စေလိမ့်မည်။
-Alcohol: သင်အရက်လောင်လျှင် Cyproterone acetate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်များ၏ထိရောက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါသည်။ သင်ဤဆေးကိုယူပြီးသောအခါအသငျသညျကိုမသောက်အရက်၏ပမာဏကန့်သတ်သင့်ပါတယ်။
-Depression: Cyproterone acetate အမှုန့်အသုံးပြုမှုကိုရံဖန်ရံခါအထူးသဖြင့်ကုထုံး၏စတင်နှင့်အတူ, စိတ်ကျရောဂါစိတ်ဓါတ်များပြောင်းလဲမှုတစ်ခုတိုးလာဖြစ်ပွားမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ သငျသညျအတိတ်တွင်စိတ်ကျရောဂါခဲ့ပြီးပြီဆိုပါကသင်သည်သင်၏ဆရာဝန်ကိုအကြောင်းကြားသင့်ပါတယ်။
-Diabetes: Cyproterone acetate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုသင်များတွင်ဆီးချိုရောဂါရှိပါကအသွေးသည်ဂလူးကို့စအဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်စေနိုင်ပါတယ်။
-Heart ရောဂါ: Cyproterone acetate အမှုန့်အရည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစုပြုံစေနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျနှလုံးရောဂါရှိပါကဒီဆေးကိုသုံးပြီးတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့နှလုံးခက်လုပ်ကိုင်ဖို့ရှိစေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သတိထားရှိစေသတည်း။
-Liver ရောဂါ: Cyproterone acetate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်အသည်းပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်ကုသမှုလပေါင်းများစွာပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ အသည်းပျက်စီးမှုကိုမဆိုရောဂါလက္ခဏာသို့မဟုတ်အရိပ်လက္ခဏာရှိပါတယ်လျှင်သင့်ဆရာဝန်တို့၏အသွေးစမ်းသပ်မှုနှင့်သင်၏အသည်း function ကိုစောင့်ကြည့်မည်ဖြစ်သည်။
-Pregnancy: Cyproterone acetate အမှုန့်ကိုအမျိုးသမီးများကပေးအသုံးပြုမှုအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
-Breast-နို့တိုက်ကျွေး: Cyproterone acetate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုအမျိုးသမီးများကပေးအသုံးပြုမှုအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
-Children: Cyproterone acetate အမှုန့်ကလေးများအတွက်အသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်မဟုတ်
Cyproterone acetate အမှုန့်, ​​အားနည်း progestational နှင့် antineoplastic လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူဒြပ်တီးရွိုက် antiandrogen ၏ acetate ဆား။ Cyproterone acetate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်အားဖြင့်ပစ်မှတ်တစ်ရှူးများတွင်အန်ဒရိုဂျင်-သွေးဆောင်အဲဒီ receptor activation ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းနှင့် testosterone ဟော်မုန်း-အထိခိုက်မခံအကျိတ်ဆဲလ်ကြီးထွားမှုကိုဟန့်တားခြင်း, အန်ဒရိုဂျင် receptor (AR) ချည်နှောင်။ ဤသည်အေးဂျင့်ကိုလည်း testicular အန်ဒရိုဂျင်လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အတွက်လျှော့ချအတွက်ရရှိလာတဲ့ luteinizing ဟော်မုန်း (LH), ကိုလျော့ချသော pituitary များ၏အဆင့်မှာ progestational agonist ဂုဏ်သတ္တိများပြုပြင်။ သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်၏မပြည့်စုံဖိနှိပ်မှုအတွက် Cyproterone acetate အမှုန့်တစ်ဦးတည်းရလဒ်များကိုနှင့်အတူကုသမှု။ ဒီအေးဂျင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတက်ကြွလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေအဘို့အစစ်ဆေးပါ။
Cyproterone acetate ကုန်ကြမ်းအမှုန့် acetae များ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါသည်:
-chloro-6-hydroxy-17 alpha methylene-1 alpha,2alpha pregnadiene-4,6 Dion-3, 20 acetate
Cyproterone acetate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်
Cyproterone acetate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်စျေးကွက်
AASraw ထံမှ Cyproterone acetate အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Cyproterone acetate အမှုန့်ချက်ပြုတ်နည်း